गुल्मीका अग्निपीडितको गुनासो : अबको बर्खा कटाउने कसरी ? – Gulmiews
गुल्मीका अग्निपीडितको गुनासो : अबको बर्खा कटाउने कसरी ?
८ फाल्गुन २०७३, आईतवार ०२:५० सन्जु काउछा मगर
गुल्मी, ७ फागुन । गत साल १८ वैशाखमा गुल्मी बडागाउँ १ र २ नम्बर वडाका दजाकोट र माझगाउँको सिंगो बस्ती आगलागीबाट ध्वस्त भयो । सिंगो बस्ती नष्ट भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दासमेत अग्निपीडितको वास टहरामै छ । दुःख र पीडामा अघिल्लो बर्खा कटाएका अग्निपीडितमा अबको बर्खा कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
बडागाउँ–१ दजाकोटकी हरिकला रासकोटीले आगलागीमा श्रीसम्पत्ति मात्रै गुमाइनन्, जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने श्रीमान् पनि गुमाइन् । ‘त्यो दिन सम्झन पनि सक्दिनँ । श्रीमान् र सम्पत्ति नै रहेनन्,’ उनले भनिन्, ‘समय फेरियो, तर परिस्थिति उस्तै छ । आँखा चिम्ल्यो कि झलझल्ती त्यही दृश्य आउँछ ।’ रासकोटीले थपिन्, ‘टिनको छाप्रोमै एक बर्ष बित्न थाल्यो, छाप्रोमै अर्को बर्खा लाग्न थाल्यो ।’ काठसहित घर निर्माणका लागि चाहिने सामग्री केही नभएको उनले गुनासो गरिन् । ‘आगलागीलगत्तै राहतस्वरूप दिएको टिनका पाताबाहेक केही पाएको छैन,’ अग्निपीडित कालीकुमारी गाहाले भनिन्, ‘घर बनाउन घडेरी त खा¥यौँ । तर, केले घर ठड्याउने ?’ आगलागीबाट उनको घरगोठ जलेको थियो । ‘१४ वटा बाख्रा, भँैसी र हलगरु सबै एकैचोटि मरे,’ उनले भनिन्, ‘मुटुमा पीडा भए पनि घरमा बस्ने आशा थियो । पूरा भएन ।’
सोही स्थानकी मीना गाहाको अवस्था पनि हरिकला र कालीकुमारीको भन्दा फरक छैन । उनले घरका सबै सम्पत्ति आगलागीमा जलेको बताइन् । मीनाले भनिन्, ‘बर्खामा पानीको डर, हिउँदमा चिसो । एक वर्षसम्म राहत आएन ।’ उनले राहत नपाउने भए स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरिन् । घर बनाउँदै गरेका बडागाउँ–१ का जुक्तबहादुर छन्तेलले अग्निपीडितले एक वर्षदेखि टहरो र छाप्रोमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको बताए । ‘गाउँमा काठ, पानी र पैसा छैन,’ उनले भने । उनले आगलागीका वेला सबैको ध्यान बडागाउँमा पुगे पनि पछि कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । ‘१० महिनासम्म पहिलो किस्ता पनि पाइनँ,’ उनले भने, ‘अलि–अलि सम्पत्ति भएकाले मैले घर बनाउन थालँे ।’ उनले गाउँमा घर निर्माण गर्ने कामदारसमेत नपाएको बताए ।
छन्तेलका अनुसार घरको पहिलो, दोस्रो तला र सम्पन्न भएपछि क्रमशः ३०, ३० र ४० प्रतिशत घर निर्माणका लागि अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, घर सकिन लागे पनि पहिलो किस्ता नआएको उनले बताए । घर बनाउन काठ र पानीको पनि निकै समस्या छ । ‘काठ पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनबाट काठ निःशुल्क दिने भनिएको थियो, तर केही पाइएन ।’ बडागाउँका यमबहादुर रासकोटीको घर बनाउँदै गरेका गोपाल गाहाले प्राविधिक ‘स्टिमेट’अनुसार घर बनाउनुपर्ने बाध्यताले पनि धेरै अग्निपीडित अन्योलमा परेको बताए । ‘आफूखुुसी बनाउने भए जसोतसो धेरैले राहत पर्खिने थिएनन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले भनेअनुसार नक्साबमोजिम बनाउन धेरैले सक्दैनन् ।’ उनले गिटी, बालुवा, टाढाको पानी, काठ र सिकर्मी गर्दा राहत रकमले प्राविधिक ‘स्टिमेट’अनुसार एक तला पनि बनाउन नसकिने बताए । बडागाउँमा ५८ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् । तर, दुईवटा घर मात्रै सम्पन्न भएका छन् । पाँचवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
के भन्छ दैवीप्रकोप उद्धार समिति ?
दैवीप्रकोप उद्धार समिति गुल्मीका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुंगानाले प्राविधिक रिर्पोट आएपछि रकम उपलब्ध गराउने बताए । समितिले तीन किस्ता बनाएर राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । पहिले जग बसालेपछि ३० प्रतिशत, दोस्रो तला बनाएपछि ३० प्रतिशत र घर सम्पन्न गरेपछि अन्तिम किस्ता ४० प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाले बताए ।
बैंकमै थन्कियो दुई करोड
आगलागीपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट एक करोड ८२ लाख रकम संकलन भएको थियो । त्यो रकम बडागाउँ अग्निपीडित राहत संकलन तथा वितरण समितिको खातामा रहेको समितिका कोषाध्यक्ष हरि छन्तेलले बताए । युके समाज गुल्मी, कुर्घा जापान सेवा समाज, वामी जापान सेवा समाजलगायत स्वदेश एवं विदेशका संघसंस्था र व्यक्तिबाट झन्डै दुई करोड संकलन भएको थियो । सो रकम बडागाउँ अग्नि पीडित राहत संकलन तथा वितरण समितिको खातामा ग्लोबल बैँक र साना किसान कृषि सहकारीमा थन्किएको छ ।
यसकारण टहरोमै अग्निपीडित
अग्निपीडित राहत संकलन तथा वितरण समिति वडागाउँका कोषाध्यक्ष हरि छन्तेलले स्थानीय समितिले पूर्ण अधिकार नपाउँदा अर्को बर्खा लाग्नै लाग्दासमेत अग्निपीडित टहरामै बस्नुपरेको बताए ।
अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो, अग्निपीडितको वर्ग विभाजनमा विवाद, प्राविधिकहरू समयमै गाउँ नपुग्नुलगायत समस्याका कारण पीडितले समयमै राहत रकम पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा मान्छे अझै त्रिपाल र टहरामै बसेका छन्,’ छन्तेलले भने, ‘घर बनाएर बस्ने वेला भयो, पहिलो किस्ता दिन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार बडागाउँमा ‘क’ वर्गका अग्निपीडित २८, ‘ख’ वर्गका २४ र ‘ग’ वर्गका ६ परिवार छन् । उनीहरूले क्रमशः तीन लाख ३५ हजार, दुई लाख ७० हजार र दुई लाख २५ हजार राहत पाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, ६ जनाको गोठमा आंशिक क्षति भएको थियो । उनीहरूले जम्मा ६० हजार पाउने निर्णय भएको छन्तेलले बताए । -नयाँ पत्रिकाबाट